I-Borated Polyethylene Sheets
Ukukhuselwa kweMisebe yeBorated Polyethylene Sheets
I-CNC iSetyenziselwe i-Borated Polyethylene Parts
Amanye amashiti e-UHMWPE kunye nezahlulo eziSetyenzisiweyo ze-CNC
Iimethi zeNdlela zeThutyana
Ibhili yeziseko ezingundoqo ezixhasa inyukliya iba ngumthetho wase-US...
Umthetho oyilwayo oxhasa iziseko ezingundoqo ezixhasa inyukliya uba ngumthetho wase-US UMongameli wase-US uJoe Biden izolo utyikitye njengomthetho uMthetho woTyalo-mali lweziSeko ezinguNdoqo kunye noMthetho weMisebenzi (okwaziwa ngokuba yi-Bipartisan Infrastructure Deal). Ipakeji ye-USD1.2 yetriliyoni yezigidigidi yinxalenye ephambili kamongameli yoBuild Back Better age...
Amandla enyukliya, ingubo kunye nekrele!
Ukwandiswa kwamandla enyukliya kuyafuneka Ukuba ngaba i-net-zero yenyukliya yinjongo eyinyani, ngoko kukho imfuneko engxamisekileyo yokwandiswa okubalulekileyo kwesakhono senyukliya, ukongeza ekugcineni amandla enyukliya akhoyo. Sinokubona ukuqala kolu lwando kuMfanekiso 3. Ngo-2020, inani le-reactors...
Uphuhliso lwamandla enyukliya kufuneka lukhuthazwe Ukukhanya okuluhlaza kufuneka kunikwe kwiiprojekthi ezininzi ezintsha eziza kuqalisa. Baza kubonelela ngemisebenzi, bakhuthaze utyalo-mali kunye nokuhambisa umbane ophantsi kwekhabhoni kwinkulungwane yama-22. Ezi projekthi zintsha ziya kuthatha ithuba lobuchule, ukwazi indlela ...
Ukwehla kokuveliswa kwamandla enyukliya Njengoko u-Sama Bilbao y León, uMlawuli Jikelele we-World Nuclear Association, wathi kwintshayelelo yengxelo, kuwo nawuphi na omnye unyaka ukwehla kokuveliswa kwamandla enyukliya phantse nge-4% kuya kuba luphawu olubi olucacileyo. Njengoko utshintsho lwemozulu yeyona nto ixhalabisayo kwihlabathi...
IFransi iceba ukwakha i-reactor yamandla enyukliya entsha
[Ngokutsho kwiwebhusayithi yeAssociated Press ngoNovemba 9, 2021] NgoNovemba 9, 2021, uMongameli waseFransi uMacron wabhengeza ukuba ukuze kuqinisekiswe ukuzimela kwamandla eFransi, ukuqinisekisa ukunikezelwa kwamandla elizwe, kunye nokufezekisa iinjongo zemozulu, ngakumbi ukukhutshwa kwekhabhoni ngo-2050 Neutralization, eFransi...
Izifudumezi zenyukliya zingenisa “ifestile yamathuba” ophuhliso
Ukuthembeka kokufudumeza kungqiniwe kwaye siya kuqhubeka nokwandisa izisombululo zoyilo Ukhuseleko ngumgca wobomi kushishino lwamandla enyukliya kunye nomgudu wobomi bokusetyenziswa ngokubanzi kwamandla enyukliya, ngoko ukhuseleko lwesifudumezi senyukliya luyinkxalabo enkulu. Kwimeko o...
Emva kokugqitywa nokugunyaziswa kweprojekthi yokuqala yokufudumeza amandla enyukliya kurhwebo eTshayina yiHaiyang Nuclear Power eShandong, ukufudumeza kwamandla enyukliya ngokuthe ngcembe kungena emehlweni oluntu. Njengenye yeendlela zokuphumeza ukufudumeza okucocekileyo, iingenelo ze...
Amandla enyukliya obushushu ngumzamo wenkqubo ontsonkothileyo oneziphene kwezoqoqosho ekufuneka zizaliswe Uqoqosho yimeko eyimfuneko yokufudumeza kwenyukliya ukuze kukhuthazwe kwimizi-mveliso. Ngokubhekiselele kwiireactors ezincinci, u-Tian Li uthe ngokotyalo-mali lokuqala e...
Ingxoxo-mpikiswano yaseJamani ngeNyukliya
ngu admin on 21-11-17
Imiba yamandla aseJamani EJamani, ixabiso lentengiso yombane linyuke malunga ne-140% ukusukela ngoJanuwari. Iingcali zikholelwa ukuba ukunyuka kwamaxabiso amandla kubangelwa ukunyuka kwamaxabiso egesi yendalo, kuba ukususela ekuqaleni konyaka, ixabiso legesi yendalo liye lanyuka ngama-440%. Ukuthi ga...
Ukuba nokwenzeka kotshintsho kwezopolitiko kuncinci Nokuba iJamani ayazi ukuba iza kuthatha indawo yamandla enyukliya kunye namalahle kwaye ekugqibeleni ifezekise iinjongo zayo zemozulu, iinkokeli zezopolitiko zaseJamani akunakwenzeka ukuba zivumele ubomi bezixhobo zabo zenyukliya eziseleyo ukuba zandiswe okwexeshana. “T...
Iinzuzo kunye neengozi zamandla enyukliya Emva konyulo lwesizwe lwaseJamani nge-26 kaSeptemba, iQela elisekhohlo le-Social Democratic Party, i-Greenist yezokusingqongileyo kunye ne-neoliberal Liberal Democratic Party baye baqalisa iingxoxo ezidibeneyo ukuze benze urhulumente waseJamani olandelayo. Isivumelwano sokuqala ...
Idilesi: I-Dacao Industrial Park, iNingjin County, iSixeko saseDezhou, kwiPhondo laseShandong, eChina.